Global Voices teny Malagasy » Resadresaka Niarahana Tamin’i Chanphal Sok: Mpanoratra sy Mpamoron-kira Kambojiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Desambra 2012 15:03 GMT 1	 · Mpanoratra Kounila Keo Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Kambodza, Haisoratra, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Namakivaky ny onjam-piainana teny, nivezivezy tetsy sy teroa i Chanphal Sok  toy ny zazakely niaraka tamin-dreniny mba hahita ny foto-piveloman'izy ireo. Nanoratra momba ny fiainana sarotra nodiaviny teo anelanelan'ny faritra Kampong Cham sy ny faritra Kratie tao amin'ny bilaoginy amin'ny teny Khmera i Chanphal, nampiasa bilaogy izy mba hanoratra bebe kokoaliteratiora, tantara fohy, vaovao fohy toy ny tantaran'ny fiteny Khmera. Indraindray, vazivazy maotina momba ny Khmera no hitantarany ny fiainany manokana. Tamin'ny taona 2009, nahazo ny loka fahatelo tamin'ny Literatiora Nou Hach izy tamin'ny tantara fohy nosoratany anaty pejy 10 ‘Kaboub Luy’ na “Valizy” .
Manana mari-pahaizana momba ny literatiora anglisy, fanta-daza kokoa amin'ny maha mpamoron-kira  ireo hira Khmera marobe sy malaza indrindra ankehitriny izy, miasa  ao amin'ny trano mpamokatra hira Hang Meas, izay orinasa mpamokatra hira fanta-daza indrindra ao Kambodza, ity mpamoron-kira 28 taona sy bilaogera mavitrika ity ankehitriny.
“Marimaritra iraisana ny fiainana. Rehefa avy nanoratra ny tantaram-piainako tao amin'ity bilaogy ity aho, hitako hoe hatraiza ny làlana nodiaviko. Renireny ny fiainana, ary na dia tsy mandrakizay aza, tena lava izany mba hiainana araka ny tokony ho izy manomboka izao,” hoy izy. Nana-potoana niresahana tamin'i Chanphal tamin'ny alalan'ny mailaka ny mpanoratra ao amin'ny Global Voices Kounila Keo .
Na dia tsy mandray vola aza aho amin'ny famoahako ireo tantara nosoratako ao amin'ny Facebook  sy sehatra hafa aterineto tahaka ny issuu.com , faly foana aho rehefa mahazo fanohanana avy amin'ireo mpamaky Khmera. Izany no mbola hanoratako ho an'ireo mpamaky ny sangan'asako. Efa nihaona tamin'ireo mpamaky Khmera marobe tamin'ny aterineto aho, ary tena ravo aho afaka mizara zavatra maro ho azy ireo ao amin'ny aterineto.
Mbola kely aho dia efa naniry ny ho lasa mpanoratra. Rehefa lehibe, te-hizara fotsiny ny ato an-tsaiko amin'izao tontolo izao aho, ka ny aterineto  no safidy tsara nofinidiko hamoahana ireo tantara. Izany no azo atao satria tsy mila ho mpanoratra matihanina ianao vao hamoaka ny sangan'asa nosoratanao. Manome fomba tsotra hamoahana ireo lahatsoratra, tantara sy tantara foronina ny Aterineto ary mahazo mpanaraka marobe avy eo. Miha-maro hatrany ireo Kambojiana miditra amin'ny aterineto, famantarana tsara amin'ny fitomboan'ireo mpamaky amin'ny aterineto izany. Taloha, tamin'izahay tsy nanana aterineto, voatery tsy maintsy nitalaho tamin'ireny trano printy ireny mba hamoahana ny bokinay, saingy ankehitriny, afaka misolo tsara ny milina mpanao printy ny Aterineto amin'ny fomba iray. Ankehitriny, te-hanoratra sy hizara fotsiny ny tsirairay. Na dia izany aza, mbola ankafiziko foana ny boky “taratasy”, saingy mbola vitsy ny mpamaky boky eto amin'ny firenenay. Matetika tsy mahomby ireo olona sasany miezaka mamoaka boky, saingy raha manambola be aho, hiezaka hamoaka boky ary hametraka izany manerana ny trano fivarotam-boky sasany. Mila mahay madanjalanja isika.
Nampiasa Aterineto aho nandritra ny taona maro, tsy miteny aho akory hoe tsy mety ny famoahana boky. Te hanoro hevitra fotsiny aho hoe tokony handinika momba ny famoahana ireo sangan'asany amin'ny aterineto ireo mpanoratra raha tsy manambola handoavana ny fanontàna boky. Raha vao nampiasa ny WordPress aho, namoaka  ny tantarako tao amin'ny bilaogy avy hatrany. Izay midika hoe, mbola tena tiako tokoa ireo boky taratasy, satria tahaka ny fahatsiarovana izy ireo izay afaka apetrako ao amin'ny fitehirezam-bokiko, na eo ambonin'ny latabatry ny fandriana izany. Tsy mitovy ny e-book (boky amin'ny aterineto) ny boky taratasy, mora trohana sy vakiana ny “e-book”- maoderina ary kelikely, saingy tsy manana lanja mampihetsipo tahaka ny boky taratasy izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/12/10/42733/